Ethiopia Oo Ku Dhawaaqday In Weerar Dhinaca Internetka Ah Lagu Soo Qaaday, Rikoodhka Waallida Ah Ee Ay Diiwaangelisay Iyo Meelaha La Bartilmaameedsaday - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaEthiopia Oo Ku Dhawaaqday In Weerar Dhinaca Internetka Ah Lagu Soo Qaaday, Rikoodhka Waallida Ah Ee Ay Diiwaangelisay Iyo Meelaha La Bartilmaameedsaday
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Dawladda Ethiopia ayaa shaacisay in lagu soo qaaday weerarro badan oo dhinaca Internetka ah sannadka 2018/19.
War-saxaafadeed kasoo baxay Hay’adda INSA, ayaa waxa lagu sheegay in sagaalkii bilood ee ugu horreeyey sannadka ee tirsiga Ethiopia, in dalkeeda lagu soo qaaday 488 weerar oo Internetka ah, kuwaas oo la doonayey in lagu baabi’iyo hay’ado warbaahineed iyo kaabeyaasha adeegyada bulshada ee dalka.
INSA waxay sheegtay in tirada ugu badan ee weerarradan oo ah boqolkiiba afartan, in lagu qaaday website-yo laga leeyahay gudaha dalka oo tabiya wararka waddanka, laakiin may sheegin inay yihiin kuwo ku hadla afka dawladda iyo inay madax-bannaan yihiin.
Kaabeyaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ayaa lagu bartilmaameedsaday weerarrada labaad ee ugu badan, taas oo dalka ka dhigtay mid la kulmay dagaalkii ugu weynaa ee dhinaca Internet-ka ah.
Hay’addu waxa ay intaas ku dartay in boqolkiiba 15 ka mid ah weerrarada oo dhacay sagaalkii bilood ee ugu horreeyey laysku gayey in lagu jabsado xogta dalka.
Warkan oo ay warbaahinta Jigjiga Online kasoo xigatay wakaaladda wararka dalka China ee Xinhua, waxa uu intaa ku daray in inta badan weerarradan lagu qaaday Ethiopia ay dhicisoobeen ka hor intii aanay dhibaato weyn u geysanin shirkadaha iyo meelaha kale ee lagu qaaday.
Ethiopia ayaa xilligan ku jirta dadaal weyn oo ay kaga guureyso nidaamkii shaqo ee qaddiimiga ahaa oo ay adeegyadeeda ugu beddelayso isticmaalka teknolojiyadda oo dunida waxyaabo badan u fududaysay.
Ra’iisal Wasaaraha Ethiopia, Abiy Ahmed oo hore u ahaan jiray madaxa INSA illaa laga soo gaadhayey April 2018, ayaa ka shaqeeyey in dalka laga hirgeliyo nidaam casri ah oo lagu ilaaliyo amaanka dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dhinaca Internet-ka.